Izabelo ezi-3 ezinokhetho lokufowuna kwi-Ibex 35 | Ezezimali
Ibex 35 yenye yee-indices zesitokhwe ngoku ezibuthathaka kwii-equities zaseYurophu. Kodwa nangona kunjalo, kukho amaxabiso amathathu abonisa imeko yezobuchwephesha engenakususwa kwaye inokuba yinto yokuthenga kwinxalenye yesibini yalo nyaka. Imalunga ne IMapfre, i-Endesa kunye neFerrovial ezibonelela ngenkalo yezobuchwephesha ecetyiswayo. Ezi zizizathu ezingaphezulu ngokwaneleyo kwezi zenzo zintathu zokuba babe nohambo oluya phezulu nokwenza ulondolozo lube nenzuzo kule nxalenye yonyaka.
Kuyinyani ukuba ezi zisitokhwe zikhuphuke kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba banokwenza ngokuchanekileyo kwiinyanga ezizayo. Akumangalisi ukuba bahambe phantsi kwe- ngokucacileyo uptrend kwaye isuka encwadini. Ngaphandle kwezilungiso ezisengqiqweni ezinokuthi ziveliswe kuqwalaselo lwamaxabiso abo. Kodwa ngaphezulu kokuphuma kuya kuba kufanelekile ukungena ngobundlobongela kwiimarike zokulingana zikazwelonke. Ngenxa yoxinzelelo lokuthengisa olusebenza kwizabelo zabo.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba ezi zindululo zokuya esidlangalaleni zihlawula isabelo esikhulu kakhulu kubanini zabelo. Ngenzuzo ephakathi ye-5,5% nangaphezulu kwenzala ebonelelwa ziimveliso zebhanki (iidipozithi zexesha elimisiweyo, iiakhawunti zemivuzo ephezulu, amanqaku ezithembiso zenkampani, njl. Ngengeniso eyongezelelweyo ukuphucula ibhalansi yeakhawunti yokonga. Ngayiphi na imeko, lithuba loshishino lokujongana nemarike yemasheya kwiinyanga zokugqibela zonyaka.
1 Ukuthenga kwi-Ibex 35: iMapfre
2 I-Endesa ikhangela i-27 euros
3 I-Ferrovial elinye ithuba lokuthenga
Ukuthenga kwi-Ibex 35: iMapfre
Indlela yayo eya phezulu ibhukisha kuba ilandela ijelo ekumgangatho ophezulu kwaye inethemba lokuba inokuqhubeka nokukhula kwiinyanga ezizayo. Okwangoku ihamba ngemfoloko ehamba ukusuka kumanqanaba ee-2,60 euro ukuya kwi-2,75 euro. Kodwa ngokubanakho ukuphinda uhlolo olusondele kakhulu kwii-euro ezingama-3 ngesabelo ngasinye. Ngakolunye uhlangothi, enye yexabiso elinezona zindululo ezivela kubahlalutyi abahlukeneyo bezezimali. Ngomgca weshishini elizinzileyo kwaye elinokukhokelela kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba bathathe izikhundla kwixa elizayo ukwenza inzuzo yabo yenkunzi.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kule nkampani yeinshurensi kukuba yenye yeenkampani ezidwelisiweyo ezibonelela ngesivuno esingcono, kunye nembuyekezo yokonga malunga ne-6,5%. Elinye lawona aphezulu kwizabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo kwaye kwelinye icala beliphindaphindekile kule minyaka idlulileyo. Lixabiso elifanelekileyo kakhulu kubatyali mali be iprofayili yokuzikhusela ngakumbi okanye egciniweyo kunye nexesha elide lokuhlala. Ngale ndlela unendlela ephindwe kabini yengeniso, kwelinye icala ngexabiso lezabelo zakho kwaye kwelinye icala ngenzala yesahlulo sakho.
I-Endesa ikhangela i-27 euros
Inkampani yombane yenye yeentaka ezimhlophe ezimnyama kwimarike yaseSpain. Kunye uhlaziyo kufutshane ne-40% kwiinyanga ezilishumi ezidlulileyo kwaye oko kubangele ukuba ndibhaptizwe kwinani lobuchwephesha lokunyuka kwamahhala. Oko kukuthi, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuxhathisa ngaphambili kwaye ke kuya kuba nesandla sasimahla ukufikelela kumanqanaba angama-27 euros ngesabelo ngasinye. Kwelinye lawona macandelo aphambili kuwo onke kwaye asebenza njengendawo ekhuselekileyo kumaxesha amabi kakhulu kurhwebo lwezemali. Ukuguquguquka ayisiyiyo enye yezona zinto ziphambili ziqhelekileyo.
Ngokubhekisele kulwabiwo lwesahlulo, akukho nto ingcono inokuthethwa kunaleyo yesithathu edweliswe kwi-Ibex 35 enika umdla omkhulu kulo mbono. Nangona ukusukela ngonyaka we-2021 Uya kwabela kuphela iipesenti ezingama-80 zenzuzo yakho ukuya koku yabela abanini zabelo. Oku kuyakuba yinto enokonakalisa ukusebenza kwe-Endesa kwixesha eliphakathi nelide. Ngokukodwa, ukuba kukho izilungiso zobunzulu obuthile kule minyaka izayo kwaye oko kuya kunciphisa ukhuphiswano kwindawo yalo kwiimarike zezemali. Ukuba lelinye lamaxabiso awathandayo kwicala labahlalutyi beemarike zengeniso eziguquguqukayo.
I-Ferrovial elinye ithuba lokuthenga
Inkampani yesizwe yokwakha yenye yemithombo yesalathiso abanayo abatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukurhweba kwisitishi esinexabiso eliya kukuxabisa kakhulu ukuphuma kula manqanaba exabiso. Kwelinye icala, kufunyenwe ukuba kwiinyanga ezidlulileyo uxinzelelo lokuthenga luyanyanzeliswa ngokucacileyo kumthengisi. Kubalulekile Rally yenkomo ekhuthaza abatyali mali abancinci nabaphakathi ukuba bajonge eli xabiso le-Ibex 35. Enye inkalo yokuvavanya ukusukela ngoku kukuba inzuzo yayo inyuke kakhulu kwiziphumo zeshishini kwikota zamva nje.
Ngelixa ngokuchaseneyo, yeyona nto imbi kula maxabiso mathathu emarike yestokhwe yaseSpain ngokwenzuzo yesahlulo sayo. Kunye buyisela kulondolozo malunga neepesenti ezintlanu ngentlawulo emiselweyo eqinisekisiweyo minyaka le nantoni na eyenzekayo kwiimarike zezemali. Ukuba kwipotifoliyo yotyalo-mali yecandelo elilungileyo labarhwebi, kokubini kuzwelonke nangaphandle kwemida yethu. Ngenxa yozinzo kumgca wokushishina, kunye nethemba lokukhula elilungileyo elinalo kule minyaka imbalwa izayo.
Kuyo nayiphi na imeko, kukho amaxabiso amathathu ekufuneka agcinwe kwi-radar ukwenza ukuba ikapitali izuze kutyalo-mali kwaye uzikhusele kwiimeko ezingazinzanga ngokuqinisekileyo eziza kuvela ngoku. Zonke zinamandla okuhlaziywa okuphezulu kunamanye amalungu kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe. Oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, yintoni ebandakanyekayo kuso nasiphi na isicwangciso esisisebenzisayo kutyalo-mali kwimarike yemasheya. Ngenxa yozinzo kumgca wokushishina, kunye nethemba lokukhula elilungileyo elinalo kule minyaka imbalwa izayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izabelo ezi-3 ezinokhetho lokufowuna kwi-Ibex 35